တစ်ဦးဇင် Maser ၏စံပြ
တရုတ်မာစတာ Huineng (638-713) ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, Ch'an ၏ဆဌမဘိုးဘေး (ဇင်), ယနေ့တိုင် Ch'an နှင့်ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှတဆင့်ပဲ့တင်ထပ်နေ။ တချို့က Huineng မဟုတ်ဘဲ Bodhidharma, ဇင်၏စစ်မှန်သောအဘဖွစျဖို့စဉ်းစားပါ။ သူ၏သက်တမ်းသည်၏အစအဦးမှာ T'ang မင်းဆက် , ဆဲဇင်၏ "ရွှေခေတ်" ဟုခေါ်ရာ၏အစအဦးခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။
တိုက်ရိုက်နဲ့ unflinching - Huineng ဇင်က၎င်း၏ vestigial အိန္ဒိယထောင်ချောက်ကိုသွန်းနှင့်၎င်း၏ထူးခြားသောဝိညာဉျကိုတွေ့ရှိခဲ့ရှိရာမွတ်ဆလင်မှာရပ်။
နီးပါးကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည် Huineng အကြောင်းကိုငါသိ၏အရာကိုပိုမိုလေ့ယင်းပလက်ဖောင်းန္တာန်တိ "တရားဓမ္မရတနာ၏အမြင့်ပလ္လင်မှန္တာန်တိ" ဟုအဆိုပါတှငျမှတျတမျးတငျထားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဇင်စာပေ၏က Seminal အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပလက်ဖောင်းန္တာန်တိကွမ်ကျိုး (Canton) မှာတစ်ဦးဗိမာနျမှာဆဌမဘိုးဘေးများကပေးသောဆွေးနွေးပွဲတစ်ဦးစုဆောင်းမှုအဖြစ်သူ့ဟာသူတွေ့ရမယ်။ ၎င်း၏ကျမ်းပိုဒ်နေဆဲတက်ကြွစွာဇင်သားအပေါငျးကျောင်းများအတွက်သင်ကြားရေး device ကိုအဖြစ်ဆွေးနွေးအသုံးပြုကြသည်။ Huineng ကိုလည်းဂန္အချို့ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် koans ။
သမိုင်းပညာရှင် Huineng ဖြစ်ကောင်း Huineng ရဲ့တရားဓမ္မအမွေခံတ Shenhui (670-762) ၏တပည့်များကသေခဲ့ပြီးနောက်ပလက်ဖောင်းန္တာန်တိရေးစပ်ခဲ့သည်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါတောင်မှသမိုင်းပညာရှင် Heinrich Dumoulin ဒါဟာဇင်ဟာဇင်မာစတာလူးဝစ္စများအရပ်မှခြီးမွှောကျခဲ့သည်။ သူ၏သွန်သင်ချက်ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါငျးတို့သကျယ်ပြန့်ကွဲပြားခြားနားရေစီးကြောင်း၏အရင်းအမြစ်မှာရပ်တယ်။ ... Hui-Neng ၏ဤကိန်းဂဏန်းဖြစ်ပါတယ် "ဟုရေးသားခဲ့သည် ဂန္ဇင်စာပေများတွင် Hui-Neng ၏လွှမ်းမိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစိတ်ချပါဖြစ်ပါတယ်။
ဆဌမရှေးဘိုးဘေးများ၏ကိန်းဂဏန်းဇင်၏အနှစ်သာရကြုံးဝငျပတျသကျ "(ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာ: တစ်ဦးကသမိုင်း, အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ [အေ, 1994]) ။
Huineng ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုမွေးရာပါသစ္စာဉာဏ်အလင်း, ရုတ်တရက်နိုးထ, အနတ္တ (၏ပညာအပေါ်အာရုံစူးစိုက် sunyata ), နှင့်ဘာဝနာ။ မိမိအအလေးပေးတိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံကိုထက်န္တာန်တိ၏လေ့လာမှုမှတဆင့်သိရှိနားလည်လာပေါ်ခဲ့သည်။
ဒဏ္ဍာရီမှာတော့ Huineng စာကြည့်တိုက်သော့ခတ်နဲ့ဖျက်စီးဖို့န္တာန်တိ rips ။
Bodhidharma ( ca. 470-543) မှာဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရှောင်လင်ဘုန်းကြီးကျောင်း ယခုမြောက်ဘက်-အလယ်ပိုင်းတရုတ်နန်ပြည်နယ်ကဘာလဲဆိုတာပါ။ Bodhidharma ဇင်၏ပထမဦးစွာရှေးဘိုးဘေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဇင်ဒဏ္ဍာရီအဆိုအရ Bodhidharma မှမိမိဝတ်လုံကိုများနှင့်ဆွမ်းပန်းကန် bequeathed Huike , (သို့မဟုတ် Hui-k'o, 487-593) ကိုဒုတိယအဘိုးဘေး။ အချိန်ခုနှစ်တွင်ဝတ်လုံများနှင့်ပန်းကန်တတိယဘိုးဘေး, Sengcan မှလွန် (။ သို့မဟုတ်ဆိုင်း-ts'an, ဃ ca. 606) ရှိသည် ဖြစ်. , စတုတ္ထ, Diaoxin (Tao က-Hsin, 580-651); နှင့်ပဉ္စမ Hongren (Hung-Jen, 601-674) ။ Hongren ယခုဟူဘေးပြည်နယ်သည်အဘယ်အရာအတွက် Shuangfeng တောင်တန်းပေါ်ကဘုန်းကြီးကျောင်း၏ဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Huineng Hongren လာ
ယင်းပလက်ဖောင်းန္တာန်တိအဆိုအရ Huineng သူကရွတ်ဆိုတစ်စုံတစ်ဦးကကြားလျှင်ထင်းရောင်းခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေဆင်းရဲသားစာမတတ်သူလုလင်ကိုခဲ့ပါတယ် စိန်န္တာန်တိ , သူသည်တစ်ဦးနိုးထအတွေ့အကြုံကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါန္တာန်တိရွတ်ဆိုထိုလူ Huineng သင်ယူ Hongren ရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေလာခဲ့ရသည်။ Huineng Shuangfeng တောင်တန်းခရီးနှင့် Hongren မိမိကိုယ်ကိုပေးအပ်သည်။
Hongren တောင်ဘက်တရုတ်ကနေဒီပညာလူငယ်တစ်ဦးရှားပါးနားလည်မှုခဲ့ငါသိမြင်၏။ ဒါပေမဲ့မနာလိုပြိုင်ဘက်များထံမှ Huineng ကာကွယ်ပေးရန်, သူအိမ်မှုဝေယျာလုပ်နေတာအစားသင်ကြားရေးများအတွက်ဗုဒ္ဓခန်းမသို့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ Huineng ထားတော်မူ၏။
ဝတ်လုံနှင့် Bowl ၏နောက်ဆုံး Pass
အဘယ်အရာကိုအောက်ပါအတိုင်းအတွက်အရေးပါသောအခိုက်ဖော်ပြတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ် ဇင်သမိုင်း ။
တစ်နေ့မှာတော့ Hongren တရားဓမ္မ၏သူတို့ရဲ့နားလည်မှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့ကျမ်းပိုဒ် compose အားမိမိဘုန်းကြီးများစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ မည်သည့်ကျမ်းပိုဒ်အမှန်တရားထင်ဟပ်လြှငျ, Hongren ကပြောပါတယ်, ကရေးစပ်သူဘုန်းကြီးဝတ်လုံများနှင့်ပန်းကန်ကိုလက်ခံရရှိနှင့်ဆဌမဘိုးဘေးဖြစ်လိမ့်မည်။
Shenxiu (Shen-hsiu), အရှိဆုံးအကြီးတန်းသံဃာတော်များ, ဒီစိန်ခေါ်မှုလက်ခံခဲ့သည်နှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းမြို့ရိုးပေါ်မှာဤကျမ်းပိုဒ် wrote:
တစ်ယောက်ယောက်ကစာမတတ်သူ Huineng ရန်ကျမ်းပိုဒ်ကိုဖတ်သောအခါ, အနာဂတ်ဆဌမဘိုးဘေး Shenxiu ကြောင့်လွဲချော်ခဲ့သိတယ်။ Huineng ကိုသူ့အဘို့ရေးသားဖို့အခြားအဘို့ဤကျမ်းပိုဒ်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာ:
Hongren Huineng ရဲ့နားလည်မှုအသိအမှတ်ပြုပေမယ့်လူသိရှင်ကြားသူ့ကိုဆုရှင်ကြေငြာခဲ့ပါဘူး။ လျှို့ဝှက်ချက်ခုနှစ်တွင်သူသည်စိန်န္တာန်တိအပေါ် Huineng ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်သူ့ကို Bodhidharma ရဲ့အင်္ကျီများနှင့်ပန်းကန်ကိုပေး၏။ သို့သော် Hongren ကိုလည်းအင်္ကျီများနှင့်ပန်းကန်ကထိုက်ဘူးသူအများအပြားအားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအခဲ့ကြသည်ကတည်းက Huineng ရန်တွေ့ခြင်း၏အရာဝတ္ထုဖြစ်လာမှသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့ကိုအမွေခံရဖို့နောက်ဆုံးဖြစ်သင့်, ကပြောသည်။
Huineng နှင့် Shenxiu ၏စံဇာတ်လမ်းပလက်ဖောင်းန္တာန်တိကနေလာပါတယ်။ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြအခြားရာဇဝငျတွေ့ပြီ။ ဇင်၏မြောက်ပိုင်းကျောင်းဟုခေါ်တွင်ခဲ့ရာနောက်လိုက်များအလိုအရကဆဌမဘိုးဘေးအမည်ရှိသောသူ Shenxiu မဟုတ်ဘဲ Huineng ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Shenxiu နှင့် Huineng သံသယသို့နာမည်ကြီးကဗျာပြိုင်ပွဲပုံပြင်ပစ်, တစ်ချိန်တည်းမှာ Hongren ရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းပင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘူး။
ဖြစ်ပျက်သမျှ Shenxiu ရဲ့နွယ်နောက်ဆုံးမှာဝေးမှေးမှိန်။ တိုင်းဇင်ဆရာယနေ့မိမိ၏နှင့်ပတ်သက် နွယ် Huineng မှတဆင့်။
ဒါဟာ Huineng Hongren ရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း left နှင့် 15 နှစ်အဘို့အချောင်ကျန်ရစ်ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့နောက်သူကတာရှည်အလုံအလောက် secluded ခဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်း, Huineng သူဆဌမဘိုးဘေးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်ဘယ်မှာကွမ်ကျိုးအတွက် (ယခု Guangxiaosi ခေါ်) Fa-Hsin ဗိမာနျတျောသို့သှားကွ၏။
Huineng ယနေ့တိုင်တစ်ဦး mummy Huineng ၏ဖြစ်ထိုင်ခုံနှင့်ဝတ်လုံဖြစ်နေဆဲဟုဆိုသည်ဘယ်မှာ Caoxi အတွက် Nanhua ဗိမာနျတျောမှာ zazen ၌ထိုင်နေစဉ်ကွယ်လွန်သွားကြပါပြီဟုလျှောက်ခဲ့သည်။
4 Sahibzade Khalsa Warrior မှူးမတ်
Laozi - Taoism ၏တည်ထောင်သူ
Nankana, ပါကစ္စတန်၏သမိုင်းဆိုင်ရာ Gurdwaras
အွန်လိုင်းအခမဲ့ Business Administration သင်တန်းများ
New York ကဟာသ
Mormonism နှင့်ဂေးအပေါ်ဖြောင့် Talk ကို
တွေ့ဆုံဝီလျံ Herschel: နက္ခတ္တနှင့်ဂီတပညာရှင်
အဘယ်ကြောင့်များနှင့်သင်မည်သို့တစ် Nitro Engine ကို mod သလား?
အဆိုပါဂူခြင်္သေ့, Panthera လီယို Spelaea အကြောင်းအချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းများ
မိန့်ခွန်း၏ကိန်းဂဏန်းများသှနျသငျဖို့ (သတိပြုရန်နှင့်အတူ) သီချင်း Lyrics ကိုသုံးပါ
ဂရက်ဂိုရီလန် Isakov နှင့်အတူအင်တာဗျူး
တွေမှာ Passive ဝေါဟာရနားလည်ခြင်း
တိုင်းတာခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းမေးခွန်းလွှာ - တစ် Meniscus Reading
လက်တင်ကြိယာ - Deponents
ထိပ်တန်း 10 Abbas သီချင်းများ
Absolute value ကဘာလဲ?
Cómo obtener ပင်စင် alimenticia မသန်စွမ်း menor mexicano con Papa en EEUU
Flerovium သို့မဟုတ် Ununquadium အချက်အလက် - FL Element ကို 114
အဆိုပါအမျိုးသမီး "ခေါငျးမာဧရိယာ" Fighting